दशैको बेलामा विदेशबाट आयो अर्को दु’:खद खबर: भारतीय ब्वा’ईफ्रेण्डले गरे नेपाली यु’वतीको ह’त्या – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > दशैको बेलामा विदेशबाट आयो अर्को दु’:खद खबर: भारतीय ब्वा’ईफ्रेण्डले गरे नेपाली यु’वतीको ह’त्या
admin October 30, 2020 जीवनशैली, प्रवास	0
एजेन्सी । चितवन- वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कुवेत पुगेकी एक नेपाली महिलाको ह’त्या भएको छ! कुवेतको एक अपार्ट’मेन्टमा बस्दै आएकी ती महिलाको श’व भेटिएपछिको अनु’सन्धानमा उनको ह’त्या भएको खु’लेको कुवेतको आन्तरिक मन्त्रालयले जनाएको छ । एक भा’रतीय ना’गरिकलाई उनको ह’त्या गरेको आ’रोप लागेको छ ! उनको शरी’रमा कुनै चो’टप’टक नभ’एको अवस्थामै मृ त्यु भएको देखिएको थियो।
अ’ल-अन्बा दैनिकलाई उ’दृत गर्दै अ’रब टा’ईम्स ले जनाए अनुसार ” आफ्नी नेपाली ग’र्ल’फ्रे’न्ड अर्कै संग ला’गेको” थाहा पाएपछि उनको ह’त्या गरेको प’क्राउ परेका भा’रतीय नाग’रिकले ब’यान दिएका छन् ! अपा’र्टमेन्टमा महिला मृ’त भेटिएको जानकारी पछि अनुस’न्धानका लागि पुगेको प्या’रामेडि’कल टिम सहित पुगेको प्रहरीले गरेको प्रा’रम्भिक अनु’सन्धानमा उनको घा’टी थि’ची ह’त्या भएको नि’ष्कर्ष नि’कालेको छ ।
अपा’र्टमेन्टमा उनीहरु संगै ब’स्ने गरेको र प्रा’य झ’गडा गरिरहने उनीहरुका छिमेकीले बताएका छन् ! झ’गडाकै क्र’ममा ति भार’तीय नाग’रिकले सिरा’नीले मु’ख थु’नेर नेपाली युवतीको ह’त्या गरेको बताईएको छ! उनको शरी’रमा कुनै चो’टप’टक नभ’एको कारण मृ’त्यु सामान्य देखिएको थियो।
य’द्यपि एक छिमे’की दम्प’तीले प्रहरीलाई झग’डा गरेको सुनेको र त्यसको केहि समय पछि उक्त व्यक्तिले भवन परि’सरमा धु’म्रपा’न गरेको देखेपछि उक्त सं”दिग्ध व्यक्तिलाई हिरा’सतमा लिएको हो । प’क्राउ परेका ति भा’रतीयको हातमा केही को’तारि’एको घा’उहरु देखिएको छ जसलाई पी’डितले आफ्नो ज्या’न जो’गाउँदा लागे’को चो’ट’पट’कको रुपमा व्याख्या गरिएको छ !
ग’हन सो’धपु’छ पछी मात्र ति भार’तीयले ह’त्या स्वी’कार गरेको र आफ्नी प्रेमि’का अर्कै संग ला’गेको थाहा पाएपछि आफुले आ’वेगमा यस्तो घट’ना गरा’एको ब’यान दिएका छन् ! केहि दिन अघि युएईमा पनि चितवन घर भएकी एक महिलाको नेपाली युव’कले ह’त्या गरेका थिए! प’क्राउ परेका ति भा’रतीयको हातमा केही को’तारि’एको घा’उहरु देखिएको छ जसलाई पी’डितले आफ्नो ज्या’न जो’गाउँदा लागे’को चो’ट’पट’कको रुपमा व्याख्या गरिएको छ !
जापानमा ४ वर्षीय नेपाली बालकको निधनले परिवारमै रुवाबासी!
परिवार पाल्न मलेशिया गएका दिपक उतै अस्ताए !